Ifulethi kwi-villa enepatio yabucala - I-Airbnb
Ifulethi kwi-villa enepatio yabucala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCamilla
Wamkelekile kwi Gothenburg esemantla echwebakazi kunye ne Bohus-Björkö.
Ndirenta indlu esandula ukulungiswa ekwigumbi elingaphantsi kwendlu yam.
IBohus-Björkö ikwichweba laseGothenburg elikumantla, malunga nemizuzu engama-30 ngemoto ukusuka eGothenburg. Ungafika apha ngendlela engu-155 ukusuka eGothenburg. Unokukhwela ibhasi ukuya eLilla Varholmen. Ukusuka eLilla Varholmen kukho iiferi zasimahla kanye ngesiqingatha seyure. Ukusuka eBjörkö kukwakho isikhephe esiya kwiziqithi ezikufuphi ezifana neKalvsund, Grötö kunye neÖckerö.
Ukucoca kokugqibela akufakiwe.
Unomnyango wakho wokungena, ipatio, indawo yokupaka, umatshini wokuhlamba kwaye wamkelekile ukuba usebenzise itrampoline egadini. Ishawa yabucala kunye nendlu yangasese zikwiflethi
4.85 · Izimvo eziyi-40
EBjörkö kukho ipizzeria, indawo yokutyela eLwandle eculwa rhoqo ngoLwesine, ukutya kwaseThai, iFeskeboa, i-ice cream kiosk, iSkeppshandel enepetroli, i-ATG kunye nempahla, i-ICA Nära, ivenkile yamagcisa, irenti yebhayisekile, amabala okudlala amabini, igalufa encinci, ijim yangaphandle kunye nejimu. .
Kukwakho neendlela zokubaleka kunye neendlela zokuhamba emahlathini nasezintabeni, iindawo zokuhlambela zikamasipala ezineejethi zokuqubha kunye nokuloba ngoononkala kubantwana abancinci. Kukwakho namawa afihlakeleyo angakumbi abo bafuna uxolo nenzolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Camilla
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bohus-björkö